महाअल्छी हुन्छन् यी पाँच राशिका व्यक्ति – Online Nepal
December 5, 2020 132
काठमाडौँ । अलि-अलि त जो पनि अल्छी त हुन्छौँ । तर संसारमा यस्ता धेरै मानिस हुन्छन्। जो महाअल्छी पनि हुन्छन्।
यिनीहरुलाई यति आलसी हुन्छन् कि आफ्नो लाभको लागि पनि कुनै कार्य गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर सोच्छन्। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार ५ राशि यस्ता छन् । जुन राशिका मानिस महाअल्छी हुन्छन्।
यस राशिका मानिसको अलस्यतासँगको सम्बन्ध नजिकको मित्रसँगको सम्बन्ध जस्तै हुन्छ। यिनीहरु पुरै दिन एकै ठाउँमा बसेर वा सुतेर आफ्नो समय व्यर्थ फाल्न सक्छन्।
यिनीहरु यतिसम्म आलसी हुन्छन्। कि आफू सुतेपछि खानेकुरा पनि अरुले लेराएर खुवाइदिए हुन्थ्यो भनेर सोच्छन्।
कर्कट राशि ,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
यिनीहरुलाई सामान्यतया जगरिलो र जोशिलो मानिन्छ। यस राशिका मानिस सिंह जस्तै राजाको जस्तो जीवन बिताउने स्वभावका हुन्छन्। तर यिनीहरु जगरिलो त्यहि समयमा हुन्छन जब उनीहरु आफूलाई मन पर्ने कार्य हुन्छ । आफूलाई अनुकुल नहुने कार्य गर्नको लागि भने यिनीहरु जस्तो आलसी हुन्छन्।
आलस्यता यस राशिका मानिसको पूरा जिन्दगी भरिको समस्या बन्न सक्छ। यी मानिसहरु आफ्नै सफलता र लाभको लागि पनि कार्य गर्न आलसी गर्छन्।,,,भिडियो हेर्न तला क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevकपालको रुखोपनका कारण लज्जित हुनुहुन्छ ? हप्तामा एक पटक कालो चिया लगाएर त हेर्नुहोस्
Nextनिकै उर्जावान र इमान्दार हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
७० बर्ष पुरानो नेपालको दुर्लभ फोटो र भिडियोहरु अहिले हेर्दा अचम्म लाग्छ !! (हेर्नुहोस भिडियो)
उपत्यकाका कार्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय !
भानुभक्त ढकालको अर्को कर्तुत, धेरै बोलेको भन्दै टेकु अस्पतालका डाक्टर माथि कारबाही